Nigerian Fintech Startup Okra Ewelite $ 3.5M Iji Tomụba Akụrụngwa Data
'Slọ ọrụ na-ahụ maka nkà na ụzụ kachasị na ụwa Accenture Ventures na-esonyere Mkpụrụ Round ụzọ Susa Ventures, itinye ego na Okra
Ulo elu nke Naijiria na ndị ọsụ ụzọ Open Finance (API Economy), Okra, nwetara ego $ 3.5m.
Onye isi nke United States na-edu gburugburu Susa Ventures, na-ekere òkè si ẹdude investors TLcom Isi Obodo, na sonyeere ọhụrụ Accenture Ventures.
Nke a na-abịa n’okpuru otu afọ site na imechi ya $ 1m tupu Mkpụrụ gburugburu naanị TLcom Isi Obodo na-esonye na gburugburu. Nke a na-eweta ego niile Okra nwetara na mkpụrụ na $ 4.5m.
Isi obodo a ga-agbasa iji gbasaa akụrụngwa data Okra gafee Nigeria.
Tọrọ ntọala site na Fara Ashiru Jituboh na David Peterside na Jenụwarị 2020, Okra's Open Finance platform bụ ngwa mgbanwe dijitalụ maka azụmaahịa n'Africa yana API na-enyere ndị mmepe na azụmaahịa aka iwulite ọrụ dijitalụ nkeonwe na ngwaahịa fintech maka ndị ahịa.
Kemgbe mmalite ya, ụlọ ọrụ akụrụngwa fintech enyela ọrụ ya na ụlọ ọrụ ego dị elu, mmalite, na ụlọ ọrụ gọọmentị gụnyere Interswitch, Access Bank, uLesson, Aella App (YC W17) na ihe karịrị otu narị ntanetị mbụ.
N’ime otu afọ site na igba egbe, ụlọ ọrụ fintech ka ahụrụ avg. Kwa ọnwa, mbido oku API nke 281%. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ enyochala azụmahịa 20M + wee nyochaa ihe karịrị azụmahịa 5.5M na Machị 2021 naanị.
Fara Ashiru Jituboh, Okra ngalaba-nchoputa na CEO / CTO na-ekwu, “Anyị na-ewu ngwaọrụ na ulo oru mkpa iji nweta zuru digital mgbanwe na anyị nwere obi ụtọ na-anabata ụfọdụ ukwuu emeri ụwa investors ka anyị na-amụba anyị Open Finance-dị ka-a-Service arụmọrụ.
Ohere iji rụkọta ọrụ ma tokọọ ọnụ bụ nnukwu ihe ma ugbu a anyị nọ n'ọnọdụ siri ike iji wee na-ewulite ma na-ebuli elu na oghere Africa, na oghere API zuru ụwa ọnụ.
David Peterside, onye nchoputa Okra na COO na-ekwu, “Companieslọ ọrụ ndị ga-achịkwa azụmaahịa azụmahịa n’ime afọ iri na-abịanụ na-ebute ụzọ ahụmịhe mbụ-mbụ maka ndị ahịa ha taa - ha ga - ewepụkwa data & ahazi iji merie oke ahịa karịa oge.
Anyị na-ekerịta otu ọhụụ na Open Finance na Africa ma nwee obi ụtọ na anyị na ndị otu na Susa na-arụkọ ọrụ ọnụ. Inwe Accenture Ventures sonyere anyị na Seed Seed na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara ikike ndị otu anyị nwere ịrụ ọrụ na mba ụwa. ”
Iduzi gburugburu, a na-akpọ Susa Ventures nke dị na San Francisco dị ka otu n'ime mkpụrụ ego mkpụrụ ego kacha mma na Silicon Valley na itinye ego ngwa ngwa gụnyere Robinhood, Flexport, Andela na Fast.
Susa makwaara maka itinye ego na ụlọ ọrụ dị elu dịka Peter Theil's Founders Fund, Index Ventures, Kleiner Perkins, GV (Google Ventures), General Catalyst, Andreessen Horowitz, na Accel Partners.
Susa's General Partners gụnyere Chad Byers, onye bụ nwa Brook Byers, onye otu ntọala Kleiner Perkins; Leo Polovets, onye bụbu LinkedIn na onye injinia Google; na Seth Berman, onye bụbu VP nke ahia na okomoko ezigbo ụlọ ọrụ Richemont (CFR: VX) - ndị nwe Cartier, Montblanc, Piaget, wdg. Seth Berman, General Partner na Susa na-agbakwụnye, “Obi dị anyị ụtọ na anyị na Okra na-emekọrịta ihe ka ha na-enyere ndị mmepe gafee kọntinenti Africa aka ịgbanwe ọrụ ego dijitalụ. Anyị na-afụ opi site na àgwà nke Okra si otu, ijeụkwụ nke mmepe, na obi ụtọ si ahịa ụlọ na ha API. ”
Omobola Johnson, Onye Mmekọ na TLcom Capital na Onye Mịnịsta na-eje ozi na ICT na Nigeria na-ekwu, “Amamịghe omimi na nka nke Fara na-atọ anyị ụtọ oge niile, nke jikọtara ya na ụlọ ọrụ nke ya na David butere n'ụlọ ọrụ ahụ ga-eme ka anyị nwee obi ike na ha na-ewulite akụrụngwa API kachasị sie ike ma sie ike n'Africa. TLcom nwere obi ụtọ ịnọgide na-enwe mmekọrịta na Okra. ”
Accenture, ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ zuru ụwa ọnụ nwere ikike nwere ike na dijitalụ, igwe ojii na nchekwa na-esonyekwa na agba a, Tom Lounibos, Onye isi Nchịkwa, t Accenture Ventures na-agbakwunye, “Fara na David nwere ezigbo ihe nlere na uru bara uru, anyị kwenyere na teknụzụ dị ike nke Okra nwere ike idozi nsogbu ndị siri ike na ahịa ego Africa. Anyị na-atụ anya ịrụkọ ọrụ iji nyere Okra aka ịleba azịza ya maka oke mmetụta.
N'elu Susa na Accenture Ventures, Okra wetara ndi mmụọ ozi ato di elu na nke a. Rob Solomon; Onye isi oche na GoFundMe - ọ bụkwa onye mmekọ mbụ na Accel, Arpan Shah; Onye nchoputa oru na onye isi nke Data Platform / Ngwa data na Robinhood, na Hongxia Zhong; Ntọala injinia na onye isi njikwa njikwa ụlọ ọrụ na Robinhood.
Omume ndị ahịa n'Africa na-agbanwe ma ndị ahịa na-achọ ahụmịhe dijitalụ zuru oke nke ọrụ niile - gụnyere ọrụ ego. N'ebe ahia ahia, ihe kacha mkpa na mbara igwe ọ bụla bụ mgbanwe dijitalụ na Okra bụ ụzọ na-aga n'ihu maka ndị mmepe na azụmahịa iji wulite ahụmịhe dijitalụ nke njedebe na njedebe maka ndị na-azụ ahịa n'Africa.
Featured Image: Fara Ashiru Jituboh, Co-guzobere na CEO / CTO (Aka nri) na David Peterside, Co-guzobere na COO (N’aka ekpe)